Bilaha: May 2018
Turkrail waxay kordhinaysaa tartamidda Wagooyooyinka Qaranka
Turkrail Railway Inc. Habip Shane, Guddoomiyaha Guddiga Maamulayaasha, ayaa wareysi siinayay Wargeyska Qalabka Qalabka Soodhawaynta Abriil; Habip Şen: HabHalkalıWaxaan usocdaa usbuuc walba. Waxaan isticmaalnaa gawaadhi ay soo saartay TÜDEMSAŞ. Sababtoo ah, adoo adeegsanaya baabuuryadeena qaran [More ...]
Tababbarka Badbaadada Gaadiidka ee Ardayda Gaarka ah
Xarunta Nolosha Bilaashka ah ee Cemil Meriç, ee ka shaqeysa degmada Kocaeli Magaalo Weyn, waxay siisaa waxbarasho ardayda naafada ah aagag badan. Markan, ardayda 69 ee wax ka barata xarunta, Kocaeli Waaxda Ilaalinta Wadooyinka ee Amniga Gobolka [More ...]
Qoraal muhiim ah oo Uber ka ah Madaxweynaha Uysal
Duqa Magaalada Caasimadda Istanbul Mevlüt Uysal ayaa ka sheegay kulanka Xarunta Iskuxirka Gaadiidka (UKM) in darawaladayada tagaasidayadu ay bixin doonaan adeeg raaxo leh. [More ...]
Kaarka gaadiidka ee degmada Caasimadda ee degmada Izmir Jesti
Heshiiska gorgortanka wadajirka ah ayaa la saxeexay oo ku saabsan shaqaalaha rayidka ah iyo shaqaalaha qandaraaska la galay ee ka shaqeeya Isutagga Magaalada Izmir iyo shirkadaha ku shaqada leh ESHOT iyo IZSU. Kaarka Sözleşme Gaadiidka waxaa sidoo kale la siin doonaa shaqaalaha rayidka ah. Iyada oo leh Degmooyinka Magaalada Izmir [More ...]
Dawlada Hoose ee Magaalada polzmir waxay hoos u dhigtay khidmadii duulimaadka ee loo yaqaan '2.86 rodol' si loo dhiiri galiyo gaadiidka bada ee wadooyinkeeda cusub ee Güzelbahçe. Jadwalka cusub wuxuu bilaabmayaa berri (Jimcaha, Juun ilaa 1). Oo lagu qalabeeyay maraakiibta tikniyoolajiyadeed ee u dambeysay [More ...]
Dhakhtarka gaarka ah ee ka shaqeeya degmada Köşk ee Aydın ayaa ka gudbay marinka aan la xakameyn ee Beyköy Mevkii isagoo wata gaadiid ganacsi oo fudud wuxuuna ka badbaaday daqiiqada ugu dambeysa ee uu ku hoos jiray tareenka Izmir-Denizli. Shil, maanta [More ...]
Shirkadda Shiinaha Liyuan Steams waxay saxiixday Heshiis Wadajir ah oo lala galay Tüvasaş
TÜVASAŞ waxay fulisaa mashruuca Tareenka Qaranka ee Korantada Korantada oo laga bilaabay Wasaaradda Gaadiidka, Arrimaha Badda iyo Isgaarsiinta. Meydadka gawaarida ee lagu soo saari doono baaxadda mashruucan waxay ka kooban yihiin astaamaha aluminiumka ee la soo koobay oo leh cabbir ballaaran. Markaa tan [More ...]
8 Smart Junction 2 ee Kozan wuxuu furmayaa Juun
Duqa Magaalada Adasa Metropolitan Hüseyin Sözlü ayaa furi doona Isgoyska Kozan June. Madaxweyne Oral, xoreynta Kozan ee laga qabsaday qabsashada cadawga [More ...]
RayHaber 31.05.2018 Warbixinta Shirka
Madaxa dhululuuga ayaa la iibsan doonaa (TÜLOMSAŞ) Soo iibinta Axka Xirmay Mashiinka Kayseri-Çetinkaya Heerkulka Nidaamka Digniinta Mashiinka Waxaa Lagu Dhisi Doonaa Iibsashada Axka Xirmay Bozanönü-Eğirdir Goobaha loogu talagalay Sahaminta Dayactirka Jidadka Adeegga Mashruuca Adeegga ayaa la Heli Doonaa [More ...]
Dhismaha Century-Old Gar ee Samsun Tekkeköy
Degmooyinka Tekkeköy ee ku yaal bartamaha degmada Tareenka Gobolka dhismayaasha qadiimiga ee taarikhiga qadiimiga ah waxay bilaabeen inay dalxiis u keenaan halka ay shaqadu ka socoto. Waxay ku taal aagga istiraatiijiga ah ee degmada iyo [More ...]
Wasiirkii hore ee wasaaradda gaadiidka Soluk ayaa booqday TÜDEMSAŞ
Wasiirkii hore ee Gaadiidka, Arimaha Badda iyo Isgaarsiinta, AK Party ku xigeen Sivas iyo 27. Musharax kuxigeenka mudada dheer Mehmet Habib Soluk ayaa booqday agaasime guud ee TUDEMSAŞ. M. Habib Soluk waxaa loo magacaabay Maareeyaha Guud ee TÜDEMSAŞ. [More ...]
Isbeddelka Wadada Halil Rifat Pasha Buses
Halil Rıfat Pasha-Konak lambarka wadada 21, oo u adeegta bixinta baahida gaadiidka dadweynaha ee ku nool gobolka Halil Rıfat Pasa, ayaa la bedelay si looga hortago ciriiriga gaadiidka ee Halil Rıfat Pasha Street. [More ...]
Maanta taariikhda: 31 May 1976 Arifiye-Xinjiang tareen cusub
Maanta taariikhda 31 May 1934 taarikh iyo 2487 waxaa laga soo iibsaday Faransiiska iyadoo loo yaqaan 'mzmir-Kasaba iyo Temdidi Railways' (703 km). Xiisaha 5 iyo 50 sanadka madax furashada 1934 Türk [More ...]
8 Meelmarin ka socota Mugla Magaaladda Metropolitan ee Garoomada Gaadiidka
Dowlada Hoose ee Magaalada Mupolla waxay ku dartay Baska cusub ee 8 duulimaadkeeda si loogu adeegsado gegida diyaaradaha. Turkey ayaa laba garoomada diyaaradaha la garoonka diyaaradaha ee Las Vegas, mid ka mid ah laba gobolladiisa oo lagu isticmaalo gaadiidka 13 8 meter cusub [More ...]